Kenya oo manta laga helay 74 xaaladooda oo cudurka COVID 19 – iftiin fm
Kenya oo manta laga helay 74 xaaladooda oo cudurka COVID 19
May 31, 2020 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Dowladda dhexe ee dalka ayaa waxay maanta daboolka ay ka qaadaay in 74 kiis oo cusub oo cudurka Corona laga helay gudaha ee dalka taasi oo tirada guud ee ka dhigeysa 1,962 qof oo qaban cudurka Corona .
Xoghayaha maamulka wasaaradda caafimadka ee dalka Rashid Aman oo jeediyey khudbadda maalinlaha ah Cudurka COVID 19 ayaa sheegay in 24-kii sacadooda ee la soo dhaafay cudurka corona laga baaray 1.574 qof halka 74 ka mid ah dadkani laga helay cudurka Corona .
Xoghayaha maamulka wasaaradda caafimadka ee dalka Rashid Aman ayaa sida oo kale sheegay in kiisaskani cusub laga helay gudaha countiga nayroobi oo laga helay 35 kiis, deegaanka Mombasa oo laga helay 23 kiis,deegaanka Busia oo laga helay 6 kiis ,Kiambu oo laga helay 2 kiis, Kwale oo laga helay 2-kiis, Kilifi oo laga helay hal kiis ,Uasin Gishu oo laga helay hal kiis , Taita Taveta oo laga helay hal kiis halka Laikipia laga helay hal kiis .
Countiga Laikipia ayaa noqonaya countiga ugu danbeeya oo laga helay cudurka Corona ee maanta iyadoo tirida ismaamulada cudurka Corona uu ka jiro ay gaartay 34 ismaamul.
Xoghayaha maamulka wasaaradda caafimadka ee dalka Rashid Aman ayaa carabka ku dhuftay in hal qof oo dheeraad ah uu u dhintay cudurka Corona gudaha deegaanka Kayole ee magaalada tan nayroobi taasi oo tirida dhimashada ka dhigeysa 64 qof .
14- qofood oo dheeraad ah ayaa la sheegay in ay ka soo bogsadeen cudurka Corona taasi oo tirida guud ka dhigeysa 478 oo qo
← Suudaan oo u yeeratay wakiilkeedii dalka Itoobiya.
Mohamed .A.Elmi →